Забур 79 CARS - Nnwom 79 AKCB
1Ao Onyankopɔn, amanaman no atow ahyɛ wʼagyapade so;
wɔama Yerusalem adan nnwiriwii.
2Wɔde wʼasomfo afunu ayɛ aduan
ama wim nnomaa,
na wɔde wʼahotefo nam ama asase so mmoa.
3Wɔahwie mogya agu te sɛ nsu
na obiara nni hɔ a obesie awufo no.
4Yɛayɛ animtiaabude ama yɛn mfɛfo,
fɛwdi ne nsopa ama wɔn a wɔatwa yɛn ho ahyia.
5Awurade, enkosi da bɛn? Wo bo befuw afebɔɔ ana?
Wo ninkunu bɛdɛw sɛ ogya akosi da bɛn?
6Hwie wʼabufuw gu amanaman
a wonnye wo nto mu no so,
7efisɛ wɔakum Yakob
na wɔasɛe nʼatenae.
9Onyankopɔn yɛn Agyenkwa, boa yɛn,
wo din no anuonyam nti;
wo din nti.
10Adɛn nti na ɛsɛ sɛ amanaman ka se,
Yɛn anim ha ara, ma wonhu wɔ amanaman mu sɛ
wotɔ wʼasomfo mogya a wɔahwie agu no so werɛ.
11Ma nneduafo no apinisi nnu wʼanim;
12Awurade, ahohora a yɛn mfɛfo asum agu wo so no,
tua wɔn so ka mpɛn ason.
13Na yɛn a yɛyɛ wo nkurɔfo, wʼadidibea nguan no,
beyi wo ayɛ daa nyinaa;
efi awo ntoatoaso kosi awo ntoatoaso,
yɛbɛkɔ so aka wʼayeyi akyerɛ.
AKCB : Nnwom 79